yakanakisa samsung giya s3 uye giya mutambo wekutarisa mabhendi uye tambo
Kuru Nhau & Ongororo Iwo akanakisa ekuona mabhendi eiyo Samsung Galaxy Watch uye Galaxy Watch Inoshanda
Iwo akanakisa ekuona mabhendi eiyo Samsung Galaxy Watch uye Galaxy Watch Inoshanda
Isu tese tinogona kubvumirana kuti iyo Samsung Galaxy Watch uye Galaxy Watch Inoshanda zviri zviviri zveakanakisa sarudzo pamusika we smartwatch izvozvi. Asi kungofanana nemawachi enguva dzose, iwo haasi ekushandisa zvishandiso, asi fashoni zvishongedzo futi. Kana ivo vanogona kuve, zvirinani, zvinoenderana nemavapfekero avo. Iwachi inotaridzika zvakanaka inogara ichikwezva maziso, asi kana iwe ukawedzera inoenderana bhendi kwairi, unogona kunyatso ita kuti iratidzike sechishongedzo chemafashoni. Nekutenda, hapana & apos; kushomeka kwesarudzo kunowanikwa kune ese Samsung Galaxy Watch, iyo inotora 22mm mabhendi, uye iyo Galaxy Watch Inoshanda, inoenderana ne20mm mabhendi.
Tichifunga izvi, takasarudza kutora mamwe emabhande emhando yepamusoro uye mabhendi eGlass Watch uye Watch Active iripo. Kunyangwe iwe & apos; tichitsvaga chimwe chinhu chinowirirana nehembe yako pachiitiko chevatema, kana bhendi rakasimba remitambo yekumhanya uye kurovedza muviri, iwe & apos; ungangowana chinhu chinokodzera zvaunoda pano.
Samsung Galaxy Tarisa mabhendi
Kartice isina simbi bhendi
Kartice inopa akati wandei ekutsiva mabhendi eGlass Watch, uye iyo yeClassic simbi yesimbi iri pakati pezvakanakisa. Iyo inorema, asi inotaridzika zvakanaka, uye inowanikwa mumarudzi akasiyana siyana uye engraving mubatanidzwa. Iri Katrice bhendi rakagadzirirwa iyo 46mm Galaxy Watch uye inopedzisa ese maviri mavara sarudzo zvakanaka. Iwe haugone & kutadza kuenda neiyi, chero iwe uchida simbi dzekutarisa mabhendi, ehe saizvozvo. Uye kana iwe usinga & apos; isu, isu & apos; isu tine zvakawanda zvakakwana pasi pazasi - kubva kune chaiyo dehwe, kune rubber, kupurasitiki!
ToroTop Milanese tambo
Ah, veMilanese varindi uye avo echinyakare kutaridzika. Rudzi rwakarukwa zvakanaka rwetambo yesimbi rwakatanga mumusangano wekuzvidzivirira muMilan, Italy, uye kubvira ipapo rashanduka rikave chikafu chewristwatch fashoni nemaitiro. Kana runako chiri chinangwa chako, haugone kukanganisika netambo yeMilanese yewachi yako yenguva, uye runako ndirwo rwunarwo mune spade. Pasina kutaura mutengo unodhura kwazvo pane ino - ingori $ 9.99! Ndosaka ichi & apos; s 'Amazon Sarudzo' chinhu.
Makadhi etambo echikwata
Kana iwe & apos; tiri kuyedza kuwana kutarisisa kwechinyakare, zvino iyi Katrice yeganda tambo inogona kunge iri yako mukoto. Iyo & apos; s inowanikwa mune akati wandei mamodheru akasiyana uye mavara, kusanganisira maviri maviri misiyano misiyano yakakandwa mukati meyero yakanaka. Iyo tambo pachayo yakagadzirwa zvakanaka uye ine isina simbi clasp iyo inozvichengetedza yakachengeteka pachanza chako.
Olytop yakarukwa nylon tambo
Kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chakaomarara, saka iyi nylon yakarukwa tambo ingave yakanaka inokwana yako 46mm Samsung Galaxy Watch. Iyo & apos; isina mvura, yakasimba kwazvo, uye zvinoshamisa kuti haina kureruka. Unogona kuenda kukwira makomo kana kushambira nayo, hapana dambudziko zvachose, kunyangwe isu tisingade kukurudzira kukurudzira kuenda kunoshambira neGlass Watch yako. Iyi Olytop yakarukwa nylon tambo iri kuenda ku $ 16.99 paAmazon, asi iwe unogona kuwana 2-pack ye $ 22.99 chete uye wosanganisa ese maviri mavara sarudzo (nhema uye uto girini).
Samsung Galaxy Tarisa Anoshanda mabhendi
Kades yakapfava silicone inofema bhendi
Iri rakapfava silicone bhendi rakanakira iyo Samsung Galaxy Watch uye yekudzidzira. Kana iwe uchida bhendi risingaremi iro rinogona kutora kurova kwakakomba, uye imwe yausingade & apos; kufunga mupfungwa uchidikitira nedikita, ipapo iyo Kades yakapfava silicone bhendi ingave sarudzo huru. Uye pa $ 7.99, sei usingatore iwe kuwana chimwe chinhu chakadai iwe chaunogona kuchinjanisa kunze apo iwe & apos; uchipinda kune mamwe maitiro akakomba? Pasina kutaura kuti iyo & apos; inowirirana ne (uye inotaridzika zvakanaka pa) iyo 42mm Galaxy Watch.
Ezco silicone bhendi
Imwe silicone bhendi yeiyo Samsung Galaxy Watch Inoshanda. Iyi inonyanya kukodzera zvemitambo uye yekuteedzera kuteedzera, sezvo iri yakapfava uye yakasimba, asi inogona zvakare kutora maziso, sezvo ichiwanikwa mune yakawanda mavara akajeka. Kunyangwe iri bhendi & apos; mutengo unodhura, iye mugadziri anovimbisa kuti aya mavara ane hupenyu haazonyangarika, kunyangwe mushure mekunge bhendi ratarisana nehunyoro uye nehusiku hwezuva,
SWEES Milanese loop bhendi
Uye heino & apos; yakanaka yeMilanese loop bhendi yeiyo Samsung Galaxy Watch Inoshanda. Yakagadzirwa nesimbi isina tsvina simbi, ine yakasarudzika yemagineti clasp michina iyo inoibata yakachengetedzeka pachiuno chako. Iko & apos; s zvakare akasiyana mhando dzemhando yekusarudza kubva, kusanganisira inopenya color inoshandura vhezheni iyo inotaridzika chaizvo yakanaka pane yepinki Galaxy Tarisa Inoshanda.
renyeredzi tarisa 4 kuburitsa zuva
Heano maitiro ekunyora skrini vhidhiyo pane Android
Maitiro ekumaka, kudhonza mazwi kana albha art, uye kuronga mimhanzi pafoni yako yeApple nenzira iri nyore
Apple inozivisa zviri pamutemo kunonoka kuvhurwa kweiyo 5G iPhone 12 nhevedzano
Android 6.0.1 Marshmallow, munguva pfupi iri kuuya kuCherechedzo 5 padyo newe!
MetroPCS inotengesa zviri pamutemo iPhones, kusanganisira iyo iPhone SE yeUS $ 50 yabviswa